IKildare Farm Foods Open Farm & Shop - IntoKildare
IKildare Farm Foods Open Farm & Shop, ipulazi lomndeni wesizukulwane sesithathu, lisemgwaqweni wemizuzu embalwa ukusuka eKildare edolobheni. Akukho mali ekhokhwayo ePulazini Elivulekile, enikeza izivakashi indawo efinyelelekayo enobungane, ikalishi nesihlalo sabakhubazekile lapho zingabona khona izinhlobo eziningi zezilwane esimweni semvelo nesikhululekile.
Ipulazi likhaya lezilwane eziningi ezinobungane, ezithokozisayo kufaka phakathi; Amakamela, Intshe, i-Emu, izingulube, izimbuzi, izinkomo, izinyamazane nezimvu. Gibela isitimela i-Indian Express uzungeze ipulazi uzwe zonke izindaba zakamuva ngezilwane.
Vakashela i-hatchery kanye ne-aquarium, udlale i-Crazy Golf ku-Indian Creek yasendlini noma uvakashele iTeddy Bear Factory, ngokubhukha umsebenzi we-inthanethi sicela uvakashele iwebhusayithi, kildarefarmfoods.com. Imicimbi yesizini efana neSanta nayo ibanjelwa kusayithi, sicela ubheke imithombo yezokuxhumana iKildare Farm Foods kanye newebhusayithi ukuthola imininingwane.
ITractor Café isebenza ngemenyu emnandi emndenini, ngakho-ke noma ngabe ibhulakufesi layo, isidlo sasemini noma nje ikhofi nekhekhe elimnandi ngeke udumazeke.
ISitolo Samapulazi sithandwa kakhulu ngabavakashi, sidayisa izinhlobo eziningi zokudla okusha futhi okufriziwe okunconywe ukukhethwa okulingayo kwezinto ezibhakiwe kanye ne-confectionery. Ukuphequlula kuhlale kujabulisa ngomndeni onobungane futhi wamukelekile.
Landa i-App yamahhala yezindaba, izipesheli nezibuyekezo, sesha i-'Kildare Farm Foods 'ku-App noma esitolo se-Google Play.
Outdoors, Shopping, Ubumnandi Bomndeni, Imvelo & Izilwane zasendle, Izinto Zamahhala Ongazenza, Amagugu Afihliwe, Amathilomu, Kildare
I-Duneany, Isifunda iKildare, Ireland.
NgoMsombuluko kuya kuLwesihlanu: 9 ekuseni kuya ku-5 ntambama
NgoMgqibelo: 9am kuye ku-3pm
Kuvaliwe ngamaSonto namaholide omphakathi